သူ့အကန့်နဲ့ သူ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
သူ့အကန့်နဲ့ သူ	Posted by mm thinker on September 2, 2016
Posted in: Facebook, Uncategorized.	Tagged: Facebook.	Leaveacomment
-တဖက်က ပြောတယ်- ၂၁ ပင်လုံ ကားတွန်းပြပွဲကြီး … ဘာညာတဲ့
-ကျန်တဖက်ကပြောတယ် ၂၁ ကြီးမျှော်တာ မျှော်တာဆိုတာ ဒိုင်းဆို ဒဒင်းစားထဲ ပါလာတော့ နိုင်ငံတော် အဆင့်သာဆို … ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ဘူးတဲ့ …
-တဖက်က ပြောတယ်-လုလု ဖင် ဒီလောက် ကြီးသည် မထင် … မျက်ကွင်းညိုနေတယ် … မေပန်းချီ သူ့ထက် ကိတ်ပါ့ … ဘာညာ
(ယောကျာ်းများ) ခေးမေမို့ ဝိုင်းရံတာကို ဗျင်းကြတယ် … ခေးမေကို အားပေးတာ … နှာဗူးကျတာ ဟုတ်ဘူး … ချွတ်တာများ ဟိုမှာသွားကြည့် ရတယ် ….
(မိန်းမများ) မိန်းမတယောက်အနေနဲ့ အသားအရည် ကိုယ်လုံးကို ထိန်းထားနိုင်တာ နည်းလား … သူက ပွင့်လင်းတယ် … ခေးမေမို့ ကိုယ်တွေက ဝန်းရံတယ် …
-တဖက်က ပြောတယ် …..
-ကျန်တဖက်က ပြောတယ် ….
ဆက်ပြောရဦးမလားဗျ … အာချောင်တာများ ပြောပါတယ် …
← Kay Moe Ko’s 2nd Solo Show	40 →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...